The Best Refreshing Dog Mats | Imbwa dzeNyika
Maragi ekutonhodza akanakisa embwa
Inozorodza imbwa meti ipfungwa yakanaka kwazvo yekuchengeta imbwa yako ichitonhorera mumaawa ezhizha. kupisa. Inogadzika uye iri nyore kushandisa, idzo rubatsiro rwakakura kune imbwa dziya dzine nguva yakaipisisa nekupisa, sezvo dzichizotonhorera nechinguva chidiki.
Muchinyorwa chino tichataura pamusoro pezvakanakisa zvekutonhodza rugs kune imbwa iyo yatinogona kuwana paAmazon, asi isu tichapindurawo mibvunzo yakajairika ine chekuita nerudzi urwu rwechigadzirwa uye isu tichakupa iwe matipi mashoma ekufunga nezvazvo paunenge uchitenga. Uye zvakare, isu tinokurudzirawo kuti iwe utarise ichi chakabatana chinyorwa pane akanyanya madziva embwa.
Cadosoigh Carpet ...
Inozorodza Mat ...
1 Meti yakanakisa yekutonhodza imbwa
1.1 Kuzvitonhodza kapeti
1.2 XL yakanaka mat
1.3 Meti inozorodza muhukuru hwakasiyana
1.4 Rakanaka rinozorodza rug
1.5 Gumbeze rinopeta rinozorodza
1.6 Meti inozorodza ine pool print
1.7 Pedhi yekutonhora
2 Chii chiri kutonhodza imbwa mameti uye ndeechii?
3 Imbwa ingave yakawanda sei pagumbeze rakadaro?
4 Unoshandisa sei meti yekutonhodza?
5 Inguva yakawanda sei inotonhorera yavanopa?
6 Mazano pakusarudza mat inotonhora yembwa
7 Kwaunotenga machira embwa anotonhodza
Meti yakanakisa yekutonhodza imbwa
Kana iwe uchitsvaga chigadzirwa chinotonhorera pasina kuisa mufiriji kana firiji, modhi iyi ndeyako. Iyo ine akati wandei akaturikidzana ejira, uye imwe yegel, iyo inotonhorera pasi otomatiki (hongu, pasina kuve nekupisa sosi padhuze, saka uchafanirwa kuibvisa kubva pasi pembwa yako kuti udzore). Iyo jira haina mvura uye yakanyanya nyore kuchenesa, sezvo iwe uchingoda kuipukuta nejira nyoro (haifanirwe kucheneswa muchina). Mukuwedzera, iwe unogona kushandisa mat kune zvimwe zvinhu, zvakadai sekutonhodza kombiyuta, kuzvizorodza, kuisa kutonhora kune imwe nzvimbo inorwadza ... Inowanikwa mumarudzi maviri uye hukuru hwakasiyana.
Ehe, mumashoko acho zvinonzi hazvina simba zvakanyanya, saka kana iwe uchida chimwe chinhu chakaomarara iwe uchafanirwa kusarudza mamwe mamodheru.
XL yakanaka mat
Kune imbwa hombe, meti inozorodza inodiwa iyo inoenderana nebasa. Iyi modhi yakareba 120 cm, ichiita kuti iwedzere kwechinguva. Inotonhorawo nekumanikidzwa kwemuviri wemhuka, sezvo iine nzvimbo yakawanda yepamusoro, inotora nguva yakareba kuti inopisa (chimwe chikonzero nei zvichikurudzirwa kufunga nezvehukuru hwembwa isati yatenga). Mukuwedzera, iri nyore kuchenesa uye unogona kuipeta mumatatu kuti uchengetedze zvirinani.
Chinhu chisina kunaka chiripo mumashoko ndechekuti nyaya yacho haina kunyanya kupikisa, uye zviri nyore kuti imbwa yedu irume mairi.
Meti inozorodza muhukuru hwakasiyana
Iyo inozivikanwa yeGerman brand Trixie zvakare ine vhezheni yayo yeaya anozorodza maragi embwa. Iine masaizi mana anowanikwa nemitengo yakaoma kwazvo (inodhura zvakanyanya inosvika makumi maviri emaeuro) uye ingangove imwe yemhando dzakatetepa pamusika. Iyo jira inotevedzera polyester uye, semamwe mamodheru, inotonhorera kana imbwa yakarara pairi. Kunyange zvazvo isingachinji uye yakatetepa, mamwe mashoko anosimbisa kuti kutsva kwainopa kwakarurama.
Rakanaka rinozorodza rug
Navaris Carpet ...
Kana iwe usingade ruvara rwebhuruu chigadzirwa ichi chinowanzo sanganiswa nacho, iwe unofarira iyi modhi, sezvo ine mavara maviri (dombo grey nevhu) ine akati wandei anotonhorera madhizaini aripo, akadai semapfupa. Kunyangwe meti yacho yakatetepa kwazvo, inozadzwa nejeli yekutonhodza uye furo inoita kuti ive yakanaka uye inotonhorera chigadzirwa. Mukuwedzera, haina mvura uye inogona kushambidzwa nyore nyore.
Gumbeze rinopeta rinozorodza
Imbwa Gumbeze rinozorodza ...
Chimwe chezvinhu zvinonakidza zve Iri gumbeze rinotonhorera rembwa nderekuti rinogona kupetwa zvakanyanya, saka haritore nzvimbo uye unogona kuenda naro nyore kwazvo. Sezvo zvakare inotonhorera nekusangana kwemhuka, hauzonetseke nekuiisa mufiriji. Kunyange zvazvo isingadziviriri zvakanyanya, kubata kunofadza zvikuru uye jira racho harina mvura, saka rinogona kushambidzwa nyore nyore.
Meti inozorodza ine pool print
Iokheira Mouse Pad ...
Kana iwe uchitsvaga dhizaini yakanaka, zvichave zvakaoma kurova iyi pateni inotevedzera mvura mudziva rekushambira, kunyangwe iri modhi, kana ichienzaniswa nevamwe pane iyo rondedzero, inodhura zvakanyanya. Haifanirwe kuiswa mufiriji kana mufiriji uye inogadzirwa nemateru matatu ejira kuitira kuti ive inodzivirira sezvinobvira kumakwenzi emhuka yako.
Tinopedzisira ne imwe yemeti yembwa inozorodza inovimbisa kuderedza kupisa kwemuviri nedhigirii nehafu yembwa yako. Iyo gel inotonhorera yega, saka chipfuyo chako chinongofanira kukwira pamusoro pacho kuti chitange kunakidzwa nekutonhorera. Kutonhora kunotora maawa matatu kusvika matanhatu, zvichiita kuti zvive zvakanaka pakurara kwenguva refu.
Chii chiri kutonhodza imbwa mameti uye ndeechii?
Maragi anozorodza embwa chinhu chikuru chekugadzira icho imbwa yako inogona kutonhodza mumaawa anopisa kwazvo ezuva. Zvinowanzogadzirwa kubva kune zvisiri-chepfu zvinhu (zvakadai semvura uye gels) zvinobatsira kudzivirira kupisa. Muchokwadi, iwo anobatsira zvakanyanya nekuti anobatsira kutonhodza imbwa, iyo inongovimba nemapaw pads uye kufemereka kugadzirisa tembiricha yemuviri wayo (imbwa hadzidiki kuburikidza neganda ravo, kusiyana nevanhu).
Izvi zvigadzirwa dzinonyanya kukosha munzvimbo dzinopisa kana kudziya kwegore roseMukuwedzera, ivo vanodzivirira imbwa yako kubva mukutambura nekupisa uye inomubatsira kurara zviri nani. Muchidimbu, ivo vanozonatsiridza zvakanyanya hupenyu hwako mukati memaawa anopisa kwazvo.
Imbwa ingave yakawanda sei pagumbeze rakadaro?
Sezvo isiri mudziyo wemagetsi, uye kuti kazhinji inogadzirwa nezvinhu zvisina chepfu (rangarira kuiongorora usati waipa imbwa yako), mumutemo hapana dambudziko kuti itonhorere chero yainoda. . Zvisinei, nguva dzose zviri nani pane kana chipfuwo chako chichishandisa zvigadzirwa seizvi, zviri pasi pekutarisa kwakoIzvi zvinonyanya kukosha kune imbwa dzinofarira kukwenya zvinhu, sezvo dzichigona kubvarura chidimbu dzikachinga, kana kutambura nekuvharika.
Unoshandisa sei meti yekutonhodza?
Kunyangwe zvinoenderana nemuenzaniso, Mati embwa anozorodza anowanzo kuve ari nyore kushandisa. Kutaura idi, mazhinji haatombodi kuiswa mufiriji kana mufiriji, sezvaanotonhodza pasi pedzvinyiriro yomuviri wembwa. Kuti uzvichajise, unozongobvisa chipfuyo chako kubva kumusoro kwechinguva.
Inguva yakawanda sei inotonhorera yavanopa?
Zvekare, zvinoenderana nekunze zvinhu zvakaita sekupisa kana chigadzirwa kuti tikwanise kuona kuti inguvai inotonhorera yavanopa imbwa yedu. Asi zvakadaro, avhareji inowanzoita maawa manomwe.
Mazano pakusarudza mat inotonhora yembwa
Kana tichitengera imbwa yedu meti inozorodza, tinogona kufunga nezvazvo mazano akawanda ekuedza kuwana kutenga zvakanaka. Semuenzaniso:
Si imbwa yako inoda kuruma uye ine katsika kekutora zvese, tsvaga ragi rinonyanya kumira. Mukuwedzera, paunenge uchiishandisa inofanira kunge iri pasi pekutarisa kwako kuti uve nechokwadi chokuti, semuenzaniso, hapana chidimbu chakamedzwa chave chakwanisa kubvarura.
El saizi yembwa Izvo zvakare, sezviri pachena, chimwe chinhu chekufunga nezvacho kana uchitenga chimwe chezvigadzirwa izvi. Uyezve funga nezvehukuru hwefiriji kana firiza yako kana uchizosarudza modhi inofanirwa kutonhodzwa neiyi nzira.
Kudzokera kune imbwa dzinofarira kuruma, kana iwe uchingoda kutora matanho ekudzivirira, ita shuwa zvinhu izvo kapeti inogadzirwa hazvina chepfu.
Pakupedzisira, edza kusarudza a jira raunoda. Zvakakosha kuti imbwa inzwe yakasununguka pakushandisa rug, saka, kuti zvinhu zvive nyore, tsvaga jira raunoziva kuti rinoda (somuenzaniso, rakafanana negumbeze raanofarira, sofa ...). Kuti uzvijaire, mazuva ekutanga iwe unogona kusiya matoyi uye mibairo pamakapeti kuitira kuti ibatanidze nechinhu chakanaka uye inotanga kuishandisa pasina kutya.
Kwaunotenga machira embwa anotonhodza
Pamwe nekuti ivo vakanyanya chigadzirwa chigadzirwa, Zvakaoma kuwana mameti embwa anozorodza achitengeswa kunze kwezvitoro zvine hunyanzvi. Naizvozvo, iwe unongowana chigadzirwa ichi munzvimbo dzinotevera:
En Amazon, nokuti vane zvachose zvinhu zvose, uye pamusoro payo zvakawanda zvakasiyana-siyana. Kunyangwe zvingave zvakaoma kuwana pfungwa yekuti zvinhu zvakamira sei zvisati zvasvika, kudzoka kwayo uye hurongwa hwekutumira hwakanaka kwazvo, saka unogona kusarudza zviri nyore kana kutenga kwacho kwakakodzera kana kwete.
Kunewo akawanda specialized online zvitoro kumhuka (zvakadai seTiendaAnimal, Kiwoko ...) kwaunogona kuwana rudzi urwu rwechigadzirwa. Chinhu chakanaka ndechekuti iwe unogona kuenda iwe pachako kuchitoro uye kuona kuti chigadzirwa chacho chii (zvakadai sehukuru, jira ...).
Pakupedzisira mukati dzimwe nzvimbo dzezvitoro Kufanana neCarrefour, iwe unogona zvakare kuwana chigadzirwa ichi, kunyangwe chichiwanzo kuwanikwa online, nekuti chinowanzo tengeswa nevatengesi vekunze.
Inozorodza imbwa mameti inzira huru yekuchengeta imbwa yako ichitonhorera pamazuva anopisa kwazvo egore. Tiudze, pane magumbeze aya wakamboedza here? Zvakaita sei? Uye imbwa yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Maragi ekutonhodza akanakisa embwa
Mameti akanakisa embwa
Ndechipi chikafu chakakodzera zera rembwa yega yega?